Pregnancy – Page2– Healthy Life Journal
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တို့ သတိပြုသင့်သည့် Amniotic Fluid Embolism အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း-တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. Amniotic Fluid Embolism အကြောင်း သိပါရစေ ဆရာ။ ဖြေ. Amniotic Fluid Embolism ဆိုတာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေက ကလေးမီးဖွားချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ကလေးမီးဖွားပြီးချိန်မှာဖြစ်ဖြစ် ရေမြွှာရည်က အမေရဲ့ သွေးထဲမှာ လေပိတ်ဆို့မှုတစ်ခုလိုဖြစ်ပြီးတော့...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်သူများ သိကောင်းစရာ အလှအပထိန်းသိမ်းနည်းအဖြာဖြာ
– ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အမျိုးသမီးတွေအများစုက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အသားအရေ အထူးကြည်လင်တောက်ပနေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလဟာ သင့်အသားအရေ၊ အသားအရောင်နဲ့ ဆံပင်သားတွေ ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဟော်မုန်းအဆင့်မြင့်တက်လာပြီး သွေးထုထည်လည်း များလာလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့် ဆံပင်တွေထူထဲစိုပြည်လာနိုင်သလို ခြောက်သွေ့နေတဲ့ အရေပြားကလည်း စိုပြည်လာနိုင်ပါတယ်။...
၊ ကိုထက် ၊ အသက် ၂၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ လူစီဟောဟာ သူရဲ့ ၆ လသာရှိသေးတဲ့ အမြွှာကိုယ်ဝန်ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလက မွေးဖွားခဲ့ရပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေက ကလေးနှစ်ယောက်လုံး မျှော်လင့်ချက်မရှိသလောက် နည်းပါးတယ်လို့ မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပေမယ့် အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ကလေးငယ်နှစ်ယောက်လုံးဟာ...
ကိုယ်ဝန် ပထမ သုံးလပတ်မှာ အိုမီဂါ၃ ဖက်တီးအက်စစ်မှီဝဲပါ။ကိုယ်ဝန်ကာလတစ်လျှောက် လမ်းကြာကြာလျှောက်ပေးပါ။ ကိုယ်ဝန် ဒုတိယသုံးလပတ်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ၊ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပါ၊ ခြေထောက်ကို ဆတ်ခနဲလှမ်းပြီးအကြောလျှော့ပါ။အစိမ်းရောင်နဲ့ လိမ္မော်ရောင်အစားအသောက်တွေစားပေးပါ။ ကိုယ်ဝန်တတိယ သုံးလပတ်မှာ ကိုယ်ဝန်၂၈ပတ်- တစ်နေ့ စွံပလွံသီး ၆ လုံးစားပါ။ ကိုယ်ဝန် ၃၀ပတ်-...
မေး ။ ရေမြွှာနည်းတယ်ပြောလို့ပါ။ ရေမြွှာများအောင် ဘယ်လိုပြန်လုပ်လို့ရပါသလဲရှင်။ ၆လပိုင်းတုန်းက ရိုက်ထားတာ ရေမြွှာက ၁၄ ရှိတယ် ပြောပါတယ်ရှင့်။ မနေ့ပြန်ရိုက်ခိုင်းတော့ ရေမြွှာက ၉ပဲရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အိုဂျီက ၉လပိုင်း ၄ရက်နေ့ထိ စောင့်ပေးမယ်။ အဲဒီအချိန်အထိ မမွေးသေးရင် ခွဲမွေးမယ်ပြောပါတယ်။...